local news Archives •
သက်ငယ် မုဒိမ်း ကျူးလွန်သူကို လွိုင်ကော် တွင် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ်
01/10/2019 Yan Naing 0
သက်ငယ် မုဒိမ်း ကျူးလွန်သူကို လွိုင်ကော် တွင် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ် ကယား ပြည်နယ် ၊ လွိုင်ကော် ခရိုင် တရားရုံးက မယားပါ သမီးကို အဓမ္မ ကျူးလွန် ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တဦးကို အလုပ်နဲ့ထောင်ဒဏ် နှစ် Continuous reading
ဖုန်းထဲမှချစ်ကြိုက်ပြီးနောက် ချိန်းတွေ့ကာ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခြင်းခံရ
09/09/2019 Thu Yay 0
ဖုန်းထဲမှချစ်ကြိုက်ပြီးနောက် ချိန်းတွေ့ကာ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခြင်းခံရ မြစ်ကြီးနား – မိုးညှင်းတွင် လူချင်းမမြင်ဖူးဘဲ ဖုန်းဖြင့်သာ ဆက်သွယ်ချစ်ကြိုက်ကြပြီးနောက် အပြင်၌ တွေ့ဆုံရန် တည်းခိုခန်း၌ ချိန်းတွေ့ကြပြီး၊ သားမယားအဖြစ်(၂)ကြိမ် ပြုကျင့်ခြင်း ခံရကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်၌ ကျောင်းတက်နေသော အသက်(၂၀)အရွယ်ကျောင်းသူ မ××× ထံသို့ ၂၀၁၇ Continuous reading
08/09/2019 Thu Yay 0
ပရိသတ်ကြီးရေ …ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးပါ…. ဝင်းနဲ့ဇော်အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းများလာပြီဟု ရှေ့နေဦးအောင်မျိုးသန့်ပြောကြား…… ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်ရှိ ခိုတောင်ကျွန်း (လိပ်ကျွန်း)မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် က ဗြိတိန်နိုင်ငံသား (၂) ဦးကို သတ်မှုနဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့…. ဇော်လင်းနဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ သေဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် အလားအလာကောင်းတွေ ရှိတယ်လို့ ရှေ့နေ Continuous reading
12/06/2019 Thu Yay 0
Breaking News ။ ။မော်လမြိုင်မြို့ မြိုင်သာယာ အလက-၆ မှ ကျောင်းသား ၄ ယောက် ပျောက်ဆုံးနေလို့ပါ … ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နေအိမ်မှ ကျောင်းသွားကြသည့် ၉ တန်း ကျောင်းသား (၂)ဦး နှင့် ၇တန်းကျောင်းသား (၂)ဦးတို့ဖြစ်ကြသော….. မောင် ထွန်း ထွန်း Continuous reading
အပုပ်နံ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရသည့် အတွက် စစ်ဆေးရာက အခန်းတွင်း သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး ၏ အလောင်းကို တွေ့ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ ဆင်ရေကန်လမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၃၅)၊ ဒုတိယ ထပ် ရှိ အခန်းတွင်….. အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးနေသည်ကို အပုပ်နံ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး Continuous reading
အောင်သပြေကျေးရွာ ပဋိပက္ခ ဖြိုခွင်းမှုတွင် တာဝန်ယူခဲ့ရသူ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေနတ်ဖြင့် အဆုံးစီရင်
အောင်သပြေကျေးရွာ ပဋိပက္ခ ဖြိုခွင်းမှုတွင် တာဝန်ယူခဲ့ရသူ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေနတ်ဖြင့် အဆုံးစီရင် ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၂ အောင်သပြေကျေးရွာ နှင့် Alpha ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကိစ္စအကြား အငြင်းပွားမှု ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့မှုကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ရသူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးမျိုးညွန့်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း သေနတ်ဖြင့် Continuous reading
၀စ်သောက်ကား အဖမ်းခံရလို့ ဖခင်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ရာမှ ဖခင် က ဝစ်သောက်ကားနဲ့လိုက်လာလို့ ဖခင်ကိုပါ ထပ်ဖမ်း
06/06/2019 Thu Yay 0
၀စ်သောက်ကား အဖမ်းခံရလို့ ဖခင်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ရာမှ ဖခင် က ဝစ်သောက်ကားနဲ့လိုက်လာလို့ ဖခင်ကိုပါ ထပ်ဖမ်း ကျန်ခဲ့တဲ့လက ည ၁၂ နာရီကျော်ရန်ကုန်မြို့အတွင်း နိုင်ငံခြားကားနံပါတ်တပ်ပြီးမောင်းတာကိုတွေ့လို့ စီစစ်တဲ့အခါ လိုင်စင်မဲ့ကားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ် အိမ်ကိုဆက်သွယ်ချင်တယ်ပြောလို့ ဖုန်းပေးဆက်တယ်….. စီ စစ် နေ တဲ့ နေ ရာ ကို အ Continuous reading
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုိယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကိုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် လွှတ်တင်တော့မည်ဟုပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုိယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကိုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် လွှတ်တင်တော့မည်ဟုပြောကြား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ Myanmar Sat –2ပါဝင်သော ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင် မည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာတွင် ဂြိုလ်တုချန်နယ် 864 MHz ကို Continuous reading
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ခမီမြို့တွင် “၄နှစ်ကလေးအား မုဒိန်းကျင့် အလောင်းဖျောက် ရေကန်တွင်းသို့ပစ်ချထားမှု ဖြစ်ပွား
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ခမီမြို့တွင် “၄နှစ်ကလေးအား မုဒိန်းကျင့် အလောင်းဖျောက် ရေကန်တွင်းသို့ပစ်ချထားမှု ဖြစ်ပွား 5.6.2019 (11:30pm) ကျိုက်ခမီ ကျားဆိပ်နေ ပွဲစားလုပ်သူမိန်းမတစ်ဦးရဲ့သမီး ၄နှစ်အရွယ် ကလေးအား လှေသားတစ်ဦးမှ မုဒိန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်…. ဖြစ်စဉ်မှာ ညနေ ၄နာရီလောက်က ကလေးအားမုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ ကျူးလွန်သူမှ ခေါ်သွားခဲ့သည်။ ည ၇နာရီ ၈နာရီဝန်းကျင်ထိ Continuous reading